Porto Riko : Ilay Fahazoandàlana Vaovao Ahafahana Mamono Hazo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Mey 2018 6:16 GMT
Nahatonga fanehoankevitra be teo amin'ny tontolon'ny blaogy Pôrtôrikana ilay fanapahankevitra vao haingana avy amin'ny Sekreteram-Panjakana Momba ny Fambolena ao Pôrtô Rikô. Ao amin'ny nosy Pôrtô Rikô, mila mangataka fahazoandàlana any amin'ny masoivohon'ny harena voajanahary ny olona iray raha te-hanapaka hazo. Izay aloha ny zotra narahina hatramin'ny fotoana nanaovan'ilay Sekretera jeneralin'ilay masoivoho,Javier Velez Arocho, ilay fanapahankevitra ahafahana mahazo avy hatrany alalàna hanapaka hazo .
Ahafahana manolotra fanomezandàlana hanapaka avy hatrany hazo manodidina ny folo raha betsaka indrindra ho an'ireo olona mampiseho ny sarin'ilay hazo na ireo hazo iriny ho tapahana ilay dingana napetraka avy amin'ilay fanapahankevitra. Talohan'izany, izay rehetra naniry ny hanapaka hazo dia tsy maintsy nanome fanamarinana ary nisy solontena avy ao amin'ny masoivoho nidina teny ifotony hanamarina fa ilay hazo a) dia tsy anaty valan-javaboahary voaaro ary b) misy antony matotra tsara hanapahan'ilay olona ilay hazo.
Ilay vehivavy blaogera, Ivonne Acosta, tao amin'ny Sin Mordazas no isan'ny voalohany nandefa fanairana, tamin'ny famintinana ilay fanapahankevitra ato anatin’ity lahatsoratra ity :
Jereo ny voalazan'ilay fanapahankevitr'i Vélez Arocho :
– Afaka azo amin'ny andro angatahany azy ny mahazo fanomezandàlana fanapahana hazo ho an'ny olona manao izany
– Ny tanjona dia ny hanafainganana ny dingana (amin'ny teny hafa, hanapahana ny hazo haingana kokoa)
– Voakasik'izany avokoa ny Kominina rehetra, afa-tsy ny ao Ponce sy Karolina, izay azo alaina ao an-toerana ny fahazoandalana hanapaka hazo.
– – Manan-kery avy hatrany ilay fanapahan-kevitra, soniavin'ny teknisiana amin'io andro io ihany ilay fangatahana raha ampy ny torohay anatin'ireo antotan-taratasy atolotra.
– Ny teny hoe “torohay ampy” dia tsy mamaritra ny fijerena ifotony ilay toerana nataon'ireo masoivohon'ny harena voajanahary. Mila mitondra sary roa an'ilay hazo fotsiny ny olona mangataka fahazoandàlana
– Tsy maintsy omen'ny mpangataka izay porofo manamarina fa izy no tompon'ny tany misy ilay hazo (na mitondra fanomezandàlana avy amin'ny ben'ny tanana raha toa ka an'ny Kominina na ny fanjakana ny tany)
Tapa-kevitra ny hanaraka ity raharaha ity i Ivonne Acosta ka naveriny navoaka, roa andro taorian'iny lahatsorany voalohany iny, ny matohandatsoratry ny gazetin'ny nosy El Vocero (amin'ny teny Espaniola) ary ny sariitatra iray (amin'ny teny Espaniôla), izay samy natokana ho an'ireo vaovao farany. Nandeha lavitra mihitsy izy tamin'ny fanombohany nanao fanangonantsonia anaty aterneto (amin'ny teny espaniola), izay, nahavita nanangona sonia maherin'ny zato, tamin'ny fotoana namoahana ity lahatsoratra ity.
Blaogera maro hafa koa no nanatevin-daharana an'i Ivonne Acosta amin'izay azo heverina ho toy ny fanentanana lehibe indrindra anatin'ny blaogy Pôrtôrikana hatreto, toy ilay bilaogy manao sangy zary tenany El Ñame (amin'ny teny espaniola) sy ilay blaogera Edwin Vazques avy amin'ny Cargas y Descargas (amin'ny teny espaniola) izay manoratra hoe :
Ho an'ireo izay miezaka hahatakatra hoe nahoana no ferana ho hazo folo ilay izy, satria noho ny rafitra arak'isa. Tsy maintsy izany no antony. Raha hazo enina dia tahaka ny hoe antikristy. Ny dimy dia hametraka olana amin'ny antontanisa. Raha iray indray dia mety ho afaka tapahan'ny olona iray mora foana tsy voatery ho hitan'ny mpifanolo-bodirindrina aminy akory. Ny valo moa dia isa vendrana. Saingy folo, ah, folo, izay ilay izy, dia mahazo isa boribory ianao.
Nivondrona koa ireo blaogera hafa (ny bilaogy rehetra dia amin'ny teny Espaniôla) taorian'ny antso nataon'i Javier Velez Arocho mba hanafoanana ity fanapahankevitra ity, anisan'izany i Elco Lao, Mario Nuñez avy amin'ny DigiZen, Siluz avy amin'ny Escribiendo ao amin'ny Vos Alta, Cesar avy amin'ny Opinion que Nadie Pidió, izay, niaraka tamin'i Enfogoná avy ao amin'ny Clientela furiosa , namoaka antso iray nampihetsi-po mba “hamonjena ny hazontsika”, Coloquiando con Don Segundo y Doña Bianc izay miantso “fanentanana maika” ary Pepe Grillo la Guía Verde, izay mametraka ilay fanapahankevitra ho “famonoan-kazo”.
Myrisa, avy ao amin'ny bilaogy En el país de los ciegos … dia tena niseho ho mavitrika tokoa, tamin'ny fandefasana imailaka ho an'ireo blaogera hafa nangatahany azy ireo hametraka toerana iray fanehoankevitra ho an'ireo mpamaky azy ireny ao amin'ny blaoginy, ahafahan'ireo hafa mpampiasa aterneto mba handray anjara amin'ilay fanentanana ihany koa. Toa efa re ny antso nataony. Ilay blaogera Pegao avy any Sal Pa ‘Fuera dia efa nametraka rohy sahady tao amin'ny blaoginy nitarika ny mpamaky ho any amin'ilay fanangonantsonia anaty aterneto. Vondrona roa ihany koa no noforonina tanaty Facebook, eto sy eto.
Tsy maintsy ekena fa nahay nampiely ny feony ny tontolon'ny bilaogy Pôrtôrikana tamin'io olana maika io.
Sary avy amin'ny Bosque del Pueblo (àlan'ny mponina) tao Adjuntas, Pôrtô Rikô, avy amin'i “Oquendo” tao amin'ny Flickr.